ငါးမန်းကင် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-shark-cartilage.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်-> ထုတ်ကုန်များ -> အေးစက်နေတဲ့ငါးမန်းကင် -> ငါးမန်းကင်
ကြှနျုပျတို့မှာ Taiwan ကြွယ်ဝသောအရည်အသွေးထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, တင်ပို့ခြင်းနှင့်စက်ရုံ ငါးမန်းကင် ထုတ်ကုန်။ ဤရွေ့ကားအလွန်အမင်းတော်ဝင်ရှာဖွေနေထုတ်ကုန်ကျနော်တို့ဘက်ဘက်မှအထောက်အကူများပြုမိလက်ရာနှင့်အတူ လာ. ထုတ်လုပ်။ ကျနော်တို့ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကလက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်ရာ၌ခန့်ထားပြီသူကိုအတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းဒီဇိုင်နာများ၏အုပ်စုတစုကိုပိုင်ဆိုင်။ 100% ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအောင်မြင်ရန်ကျူးလွန်ကျနော်တို့တသမတ်တည်းမဖြစ်မီနှင့်အပြီးနောက်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုမှာအများဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းသေချာစေရန်အစွန်းရောက်ဂရုစိုက်
မြင်းစီးသူရဲအတူအမြောက်အများသို့မဟုတ် 1kg အိတ်၌ iqf
0 င် glazing-20%
အဓိကအကြောင်းရင်းသစ်ရွက်ဖက်တီးအက်ဆစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါးအဆီမြင့်မားသောအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်နေစဉ်စိတ်ထဲငါးကိုစား,အများဆုံးငါး,သာ 1 သစ်ရွက်ဖက်တီးအက်ဆစ်အကြောင်းအရာ-3%.21 အထိပါဝင်တဲ့ငါးမန်းအသား.8%ဆီ,မြင့်မားသောလက်စထရောဖို့သာခဲ၏သစ်ရွက်ဖက်တီးအက်ဆစ်စားသုံးမှု,အဖြစ်သွေးကြောများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပျော့ပြောင်း.ငါးမန်း linoleic acid ကို,ထို့အပြင်အမေရိကန်နှင့် Creatine သည်အဖြစ်လူသိများ,ခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားတဲ့ပါဝင်သောသာမန်လူ့အခါအသားအရေ microvascular permeability ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်နှင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှဓါတ်ရောင်ခြည်ကြောင့်ထိခိုက်မှုအမျိုးမျိုးကနေအရေပြားကိုစောင့်ရှောက်ရန်-အရည်အသွေးမြင့်ငါးကော်,အဓိကအားဖြင့်ကော်လာဂျင်နဲ့ elastin ဖွဲ့စည်းမှု၏ရေးစပ်,အကျိုးရှိသောဦးနှောက်အမြင်အာရုံနိုင်ပါတယ်.ကော်လာဂျင်ကအရေပြားအိုမင်းနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်,ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်-ပျော့ပျောင်းသောရွှေကို.
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်များတွင်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုခံစား။ ဒီအောင်မြင်မှု, ကြှနျုပျတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင်တို့သည်ငါတို့၏အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ တှနျ့ဆုတျပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင်သည်မည်သည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရှိပါက။